रानीपोखरी पुनःनिर्माणमा प्रयोग भएको कंक्रिट हटाइयो « प्रशासन
काठमाडौं – रानीपोखरी पुनःनिर्माणको क्रममा यसअघि प्रयोग भएका आधुनिक निर्माण सामग्री (कंक्रिट) हटाइएको छ।
अबको केही दिनमानै पुनःनिर्माणको काम सुरु हुने काठमाडौं महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। १८ महिनादेखि निर्माण कार्य भइरहेको रानीपोखरीमा आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग भएको चौतर्फी विरोध आएपछि विगतमा निर्माणको क्रममा प्रयोग भएको आधुनिक निर्माणको सामग्री सबै हटाइएको हो।
भूकम्प जानुअघि जस्तो अवस्थामा रानीपोखरी रहेको थियो सोहीअनुरुप पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न गरिने महानगरपालिकाका इञ्जिनियर राम थापाले जानकारी दिए।
थापाले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको शुरुवातमा नै काम सुरु गरेर त्यसै आर्थिक वर्षमा नै सक्नेगरी महानगरपालिकाले काम अघि बढाउने छ, सबैसँग सल्लाह भइसकेको हुनाले यसअघिजस्तो काम रोक्ने र विरोध हुँदैन तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न हुन्छ।’
पुरातत्व विभागबाट सहमति आएसँगै पुनःनिर्माणको काम सुरु हुने पनि महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। त्यसका लागि साउनको पहिलो सातासम्म कुर्नुपर्छ।
यसअघि कामपाले आगामी जेठ १५ गतेदेखि पुनःनिर्माण सुरु गर्ने जानकारी गराएपनि हालसम्म पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन। २०७२ सालको भूकम्पको कारण रानीपोखरी र पोखरीको बीच भागमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा पनि क्षति पुगेको थियो।
प्रताप मल्लले आफ्ना छोरा चक्रवर्तीन्द्र मल्लको नाममा यो पोखरी बनाएका थिए। यो पोखरीको निर्माण कार्य करीब पाँच वर्षभित्र सम्पन्न अर्थात नेपाल संवत् ७८९ (वि.सं. १७२५) मा भएको थियो र नेसं ७९० (वि.सं. १७२७/इसं १६७०) मा शिलापत्र राखिएको थियो। यसलाई नेपाल संवत् ८११ इसं १६११ मा न्हुरपुखुर (न्हुपुखु) भनिएको छ जसको अर्थ नयाँ पोखरी भन्ने हुन्छ।
बालगोपालेश्वर मन्दिरको स्वरुप ग्रन्थकुटशैलीको थियो। यसको प्रमाण हाल मन्दिरको चारैतर्फको प्रवेशद्वारमा राखिएको ढुंगाद्वारा निर्मित संघारले पनि पुष्टि गर्दछ। उक्त कुरा प्राप्त पुरानो मन्दिरको शैलीको रेखाचित्र (स्केच)बाट पनि प्रष्ट हुन्छ। रासस